Teepee mahazatra - Moi Mili
Ny tranolain'i Moi Mili dia tsara amin'ny fandaharana ny fikarakarana ny zoro lalao ho an'ny zanatsika na fanomezana ara-pianakaviana indraindray. Ny teepees mahazatra dia vita amin'ny lamba matevina. Ny manontolo dia voapaika amin'ny fanamboarana landy.
Teepee dia manana varavarankely eo ankaviany. Ny tehina kesika ataonay dia miolakolaka sy ahosotra, hamatotra ny tady manontolo. Ny tranolay mahafinaritra dia manana rindrina 5 sy toby pentagonal, mahatonga azy ireo ho matanjaka kokoa ary lehibe kokoa noho ny lay misy ny fototra efatra. Izahay dia mamokatra any Polonina, indrindra avy amin'ny vokatra avy any poloney. Manasa anao izahay hanana fahafinaretana eto amin'ity tontolo ity ary hamporisika anao hamorona setrina Indiana.
Tranolain'i Teepee "Hery voninkazo" ho an'ny ankizy
Tranolain'i Teepee "Voajanahary"
Tranolain'i Teepee "Volontany volamenakaka" ho an'ny ankizy
Tranolain'i Teepee "Beż" ho an'ny ankizy
Tranolain'i Teepee "Akcent" ho an'ny ankizy
Tipi lay "Mint and sand"
Tranolain'i Teepee "Majorca amin'ny orana"
Tranolain'i Teepee "Ranomasina sy masoandro"
Lay Teepee "rose Vintage"
Teepee mahazatra "ravina palmie"